Bushraa: Dhamaan maqaalada qoraaga Soomaaliyed C/waaxid Khlaiif-wafaqahu Allaah- - Shabakadda Al-Qimmah||Golaha U Gargaarayaasha Mujahidiinta
|| MUTAJADDID Inshallaah || Xamlo Tasaamiim Gaar ah aan ku garab istaagayyo Doowladda Islaamiga Ciraaq iyo Shaam + PSDs Shabakadda Al-Qimmah||Golaha U Gargaarayaasha Mujahidiinta > Muntadaha Dhacdooyinka & Siyaasadda Sharciga ah
> Mawadiicda Heerka Sarre Ah
Bushraa: Dhamaan maqaalada qoraaga Soomaaliyed C/waaxid Khlaiif-wafaqahu Allaah-
Thread Starter Mr.BiLaL
#1 21st June 2008
Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxariis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato. Muqaawamada iyo Abuu Mansuur weydiideen shirkii ka socday Asmara. Anigu lafteydu si toos ah ayaan maqaal aan ku diiddanahay uga qoray. Shaki ma leh in dad badan oo daacad ah ay meesha joogeen laakiin waxaa meesha is dhexyaacayey dad tiro badan oo kala ujeeddo ah. Dad dibaha ka yimid oo damac siyaasadeed leh. Dammanayaal sheeganayey xildhibaanno baarlammaan iyo dad daacad ah oo sidaas dan moodday. Niman badan oo Xuseen Caydiid iyo Shariif Xasan leh baan ka magaacabay. Raggaan qoonsaday waxaa ku jiray sheekh Shariif laakiin waan ka gaabsaday anoo u tixgeliyey wanaagiisii hore. Laakiin hadda maaddaama uu isa soo bannaandhigay ayaan goostay inaanan ka gabban qofkaan is dhaho wuxuu khiyaamo ku wadaa qaranka Soomaaliyeed. Muqaawamada iyo Abuu Mansuur (iyo markii Shariif qummanaa) waxay sheegeen iney jiraan seddex cadow:
1. Dagaaloogayaasha Soomaaliyeed iyo wixii ku caqli ah. 2. Tigreega iyo wixii ku xiran (Yemen, Jibuuti,�.iwm.) 3. Cadowga kale ee dibadda oo u horreeyo maamulka Bush iyo wixii raacsan. Muqaawamada, Abuu Mansuur iyo Soomaali badan weli meeshoodii bey taaganyihiin halka sheekh Shariif bilaabay inuu cadowgii ku soo koobo Itoobiya oo keliya! Wuxuusanba fahmin in dagaalkii uu ku soo caanbaxay uusan la gelin Itoobiya ee uu la dagaalay dagaaloogayaal ay soo kireysteen maamulka Maraykanka haddaad rabto dheh CIA. Dagaaloogayaashu waa cadowga koowaad ee Soomaaliya. Wixii dowladdii hore geysatay ma Zenawi baa geystay? Wixii Caydiid iyo dagaaloogayaasha kale geysteen ma Zenawi baa shuqul ku lahaa? Markii USC-du Koonfurtoo cagta marinesay; Zenawi cidna ma aqoon welina ma noqon ra�iisul wasaare. Marka hadda ma la fahmay in cadowga koowaad yahay dagaalooge iyo waxa la shaqeysta? Abuu Mansuur waa ogyahay oo waa isaga dhaha lama fariisanayo C/hi Yuusuf, Nuur-cadde, Cabdi Qeybdiid, iyo Maxamed-dheere halka Shariifku diyaar u yahay in uu wax la qeysado. UN-ka uu sheekh Shariif ka sugayo iney wax u qabato; Abuu Mansuur wuxuu u arkaa qolo u shaqeysa maamulka Maraykanka. Dhabcan waa saas. Kama hadleyno hay�adaha gargaarka ee waa Golaha Amniga. Is-caawintu waa ka dhaxeysaa binu Aadamka. Markaan Tigreega ka hadleyno kama wadno waxaan la dagaaleynaa qof kasta oo u dhashay Itoobiya. Soow dad u dhashay Itoobiya ma joogaan Boosaaso? Hargeysa, Gaalkacyo iyo meelo kale? Haa. Waa dad qaxootiya oo u baahan in sidii loo caawin karo loo caawiyo. Marka hay�adaha gargaarku halkaas bey soo galayaan. Maamulada Maraykanku waxay Golaha Amniga ugu shaqeystaan labo siyaabood: 1. Qofkii Maraykanku maaro u waayo wuxuu ka dhigaa sidii qof aan dabaal aqoon oo biyo lagu tuuray (wuu xanuujiyaa oo laayaa). Dabadeedna wuxuu Golaha Ammaanka ku dhahaa iska dhiga qof badbaadinaya oo soo qabta. Ka warran qof biyo ku haftoonaya ma diidayaa cid caawisa? Taasaa keentay markii sheekh Shariif u adkeysanwaayey kaneecadii, dukheyntii kaarayaasha iyo madaafiicda Itoobiya iyo tii diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayuu yiri Ilaahoow yaa mar gacanta i qabta. Nasiib-darro waxaa gacanta ku dhigay CIA iyo UN-ta. Muqaawamada kale oo Ilaah ku xiran waxaa badbaadiyey oo dabaasha baray Ilaah. Marka meel kasta ooy tagaan waa badbaadaan. Golaha Amnigu intuusan gacanta ku qaban wuxuu shuruud kaaga dhigayaa inaad ogolaato waxay wataan. Waxay iska dhigaan iney maamulka Maraykanka ka madaxbannaanyihiin oo ay dhexdhexaad yihiin. Laakiin si ka khiyaamo badan seddexdaas cadow ayey noola xaalaan. 2. Haddii qof Soomaaliya oo raba inuu dadkiisa Soomaaliyeed ee biyaha ku hafanaya ka badbaadsho waxaa isa soo taagaya Golaha Ammaanka oo oranaya: adigu waxaad ka